Bountysource: ikpo okwu inye ego maka ihe ngwanrọ mepere emepe | Site na Linux
N'oge ndị ọzọ, na Blog anyị ekwuola okwu nke Etu esi enweta ego Software na Open Source? y Kedu otu esi ebi ndụ na-eme Free Software na Open Source?. Ma n'ezie, ọ bụghị naanị isiokwu sara mbara, mana esemokwu na mgbe ụfọdụ ọ bụ adịghị njọ, maka ụfọdụ.
Agbanyeghị, taa, ọ bụ ntụgharị ịmata otu n'ime ọtụtụ nhọrọ iji mezuo nke a agụụ "ọgwụgwụ", ihe bu ibi ndu nke ahuhu ya Free Software na Open Source. A na-akpọ nhọrọ a: Onyinye.
Nweta ego maka isi mmalite
Okwesiri igosiputa oge umpteenth na mpaghara a ekwuru, na tupu ịbanye kpamkpam n'ime isiokwu nke Onyinye, na ọ dịghị onye bụ ihe nzuzo, na mgbe ọ na-abịa ime mmemme, akwụkwọ ma ọ bụ nkwado, nke ma obu maka, ihe Free Software na Open Source, karịsịa maka GNU / Linux, ọtụtụ n’ime anyị ka akpọrọ na ọtụtụ n’ime anyị na-enyere aka. N'ihi ya, anya ọma na onye ọ bụla nwere obi ụtọ.
Ọzọkwa ọtụtụ ma ọ bụ anyị niile maara, na na Ofwa nke nke nwere ikike, nke emechiri emechi na nke azụmahịa ọ na-adịkarị ka ọ dị mma ma nabata ndị mmadụ «Ndụ site na Software kere ma ọ bụ mee», ma n'ọkwa achụmnta ego ma n'ọkwa ndị ọkachamara.
Agbanyeghị, ọ bụghịkarị otu, na Free na-emeghe software ụwa, ebe ọ bụ na, na ọkwa nke onwe na nke obodo, a na-enwekarị nkwanye na / ma ọ bụ iguzogide, n'akụkụ ụfọdụ, n'ihi oke ahụ ntughari asughari nke gini ihe niile n'efu na imeghe ga-abụrịrị n'efu ma ọ bụ n'efu. Ọ bụ ezie na, luckily, na azụmahịa larịị e nwere nnukwu ina na nkwado maka ọkachamara na mpaghara a nke software.
Na ka ị ghara ịgbasa na nke a, mgbe ị gụsịrị akwụkwọ a, anyị na-akpọ gị ka ị gụọ 2 gara aga metụtara posts banyere kwuru, ya bụ, dị ka ihe Etu esi enweta ego Software na Open Source? y Kedu otu esi ebi ndụ na-eme Free Software na Open Source?:
Etu ị ga-esi nweta ego maka Projects Source Projects
Arụmụka: Nye onyinye ma ọ bụ enyela! Nke a bụ nsogbu. Ekwela ka sọftụwia na akwụkwọ ndekọ aha efu ghara ịnwụ. Onweghi ihe efu n’ebighi ebi!
1 Bountysource: Nkwado maka ngwanrọ emeghe
1.1 Kedu ihe bụ Bountysource?
1.2 Kedu ụdị ọrụ a na-ahapụ na Bountysource?
1.3 Kedụ ka Bountysource si arụ ọrụ?
1.3.1 Wardsgwọ Ọrụ (Uru)
1.3.2 Mgbasa Ozi Nnu
1.4 Ndị ọzọ na Bountysource
Bountysource: Nkwado maka ngwanrọ emeghe
Kedu ihe bụ Bountysource?
N'ime ya ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, o nwere nkọwa na-esonụ:
"Bountysource bụ ihe ngwanrọ na-enweta ego iji nweta ngwanrọ. Ndị ọrụ nwere ike melite ọrụ mmeghe na-amasị ha site na ịmepụta / ịnakọta ụgwọ ọrụ na itinye ego".
Kedu ụdị ọrụ a na-ahapụ na Bountysource?
"A na-anabata ụdị Open Open ma ọ bụ Free Software oru. Na mkpokọta, a na-anakwere ikikere ngwanrọ niile nke Open Source Initiative ma ọ bụ Free Software Foundation nabatara.".
Kedụ ka Bountysource si arụ ọrụ?
Ulo elu a na-enye usoro abuo maka ego oru ngo na ntinye uru, ndia bu:
Wardsgwọ Ọrụ (Uru)
N'okpuru atụmatụ a, ndị ọrụ ikpo okwu na-akwụ ụgwọ ụgwọ maka isiokwu mepere emepe ma ọ bụ arịrịọ atụmatụ ha chọrọ ka a gwa ha. Mgbe ahụ ndị ọrụ ndị ọzọ, ndị mmepe ma ọ bụ na ọ bụghị, na-aga n'ihu ịmepụta ihe ngwọta maka arịrịọ ndị a kwuru, bụ ndị mechiri iji nweta ụgwọ ọrụ kwekọrọ na Platform. Na mgbakwunye, enwere ndị nkwado ha nwere ike ịnabata ma ọ bụ jụ arịrịọ ma ọ bụ azịza. Yabụ ọ bụrụ na anabatara ha, Bountysource na-akwụ ndị ọrụ ụgwọ ọrụ ụgwọ ọrụ ụgwọ ọrụ.
Mgbasa Ozi Nnu
N'okpuru atụmatụ a, ndị ọrụ nke Platform na-emepụta arịrịọ (ọrụ / ọrụ) wee kwuo ego anakọtara n'ime ya. Otu uru dị na nke a bụ na Platform na-enye ndị ọrụ GitHub (otu / otu) aka imepụta akpaghị aka dịka otu na Bountysource. Ya mere, ọ bụ naanị ihe dị mkpa iji gbasaa ozi gbasara mkpọsa ego ma chere maka ego a ga-anakọta, site na ntinye nke ịkwụghachi ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ otu oge site n'aka ndị ọrụ ya.
Maka ozi ndị ọzọ na weebụsaịtị a, ịnwere ike ịnweta njikọ ndị a: Bountysource Ajụjụ.
Ndị ọzọ na Bountysource
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata oru ngo dika Bountysource Anyị na-agba gị ume ka ị gụọ akwụkwọ anyị metụtara nke ọ bụla n'ime ha:
Xs: koodu - Nhazi usoro ego maka imeghe oru ngo
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Bountysource», magburu onwe ya na-emeghe iyi software ego n'elu ikpo okwu, yiri nnọọ Okwu y Xs: koodu; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Bountysource: Platform Ego maka Open Source Software
Ndị na-agba ọsọ na-ezuru koodu isi site na ụlọ ọrụ gọọmentị US na ụlọ ọrụ ndị ọzọ